အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး Anime (၄)ကား | Duwun
ဒီတစ်ခေါက်တော့ လူကြီးလူငယ်မရွေးနှစ်သက်ကြတဲ့ Animated Film တွေ အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးလို့ စာရေးသူ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Anime တွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ဘယ်ကားတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ဖတ်ရှုပေးပါဦးနော်။
(၁) Grave of the Fireflies
ဒီ Animated Film လေးကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းကထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာ Isao Takahata က ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။စစ်ပွဲတွေကြောင့် လူသားတွေ ခံစားနေရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပြီး အဓိက ဇာတ်ကောင်တွေအနေနဲ့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကို အခြေတည်ပြီး ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းပြောရရင်တော့ World War II အတွင်း မိဘတွေနဲ့ကွဲကွာသွားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ သူ့ရဲ့ ညီမလေး နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖေးမရင်း အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရှုရမှာပါ။ စစ်ပွဲတွေအတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေနဲ့ လက်တွေ့ဘဝမှာပါ ရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းအောင် ပုံဖော်ဖန်တီးထားတဲ့ Animated Film ကောင်းတစ်ခုပါ။ IMDb မှာလည်း Rating 8.5 ရထားပါတယ်။
(၂) My Neighbor Totoro
My Neighbor Totoro ကတော့ ကလေးဘဝပျော်ရွှင်စရာတွေကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ဇာတ်ကောင်လေးတွေ ထည့်သွင်းပြီး ဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ Animated Film ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Hayao Miyazaki က ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ကာ IMDb Rating 8.2ရရှိထားပါတယ်။ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့တာကြောင့် ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ အမေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ကျေးရွာလေးတစ်ခုကိုသားအဖသုံးယောက်ပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်။ ကျောင်းနေအရွယ် Satsuke ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ ညီမငယ်လေး Mei တို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်က သူတို့ပြောင်းလာတဲ့ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ ဝိညာဉ်လေးတွေကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိသွားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေထိုင်လာရင်း တစ်နေ့မှာတော့ ထူးဆန်းတဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ မှင်စာပုံစံ ပုပုဖိုင့်ဖိုင့် အကောင်လေးတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးသွားကြပါတယ်။သူတို့တွေ ပူးပေါင်းပြီး ဘယ်လို စွန့်စားမှုတွေ လုပ်ကြမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် Animated Film ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Kiki’s Delivery Service
ဒီ Animated Film လေးကတော့ စုန်းမျိုးရိုးတွေကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးအကြောင်းကို အခြေတည် ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာကတော့ Hayao Miyazaki ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၉၊ ဇူလိုင်လမှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး IMDb Rating ကတော့ 7.9 ပါ။ စုန်းတွေရဲ့ ရိုးရာအရ အရွယ်ရောက်တာနဲ့ နယ်မြေအသစ်ကို ပြောင်းပြီး အခြေချရပါတယ်။ Kiki လို့ခေါ်တဲ့ စုန်းမျိုးနွယ်ဝင် ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေး တစ်ယောက် တစ်နယ်တစ်ကျေးမှာ ဘဝအခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုစွန့်စားပြီး ကျော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမှာပါ။၁၉၈၉ က ထွက်ရှိထားတာ ဖြစ်ပေမယ့်လို့ Animation ဖန်တီးထားတဲ့ ပုံစံတွေက အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အခု ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် မရိုးနိုင်မယ့် Animated Film လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Fantasy အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၁နာရီနဲ့ ၄၃မိနစ် ကြာမြင့်ပါတယ်။
(၄) Your Name
Your Name ကတော့ Otaku မဟုတ်တဲ့ သူတွေတောင် သိကြ၊ ကြည့်ကြတဲ့ Drama, Fantasy အမျိုးအစား Animated Film ပါ။ ၂၀၁၆ သြဂုတ်လမှာ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် လူတိုင်းလိုလို အခုအချိန်ထိ သတိတရနဲ့ ကြည့်ဖြစ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ IMDb Rating ကတော့ 8.4 ဖြစ်ပြီး Box Office မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 361 million ထိ စံချိန်တင် ဝင်ငွေရရှိခဲ့တာပါ။ Your Name ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Production ကတော့ CoMix Wave Films ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာကတော့ Makoto Shinkai ပါ။ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် Your Name ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကို အနည်းငယ်ပြောပြပါမယ်။ ကျောင်းနေအရွယ် ဆယ်ကျော်သက် ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို အဓိကဇာတ်ဆောင် အဖြစ်ပုံဖော်ထားပြီး နေထိုင်တဲ့ မြို့လည်း မတူတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ခန္ဓာကိုယ်ချင်း လဲနေတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ကြုံရပါတယ်။ နှစ်ယောက်လုံး ဒီဖြစ်ရပ်ကို သိရှိသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ အပြင်မှာ လူချင်းဆုံတွေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မမျှော်လင့်ဘဲ ကောင်မလေးနေထိုင်တဲ့ မြို့လေးမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံတွေ့နိုင်မလား? မြို့လေးကရော ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ အကောင်းဆုံး Anime တွေလို့ မှတ်ယူရတာတွေကို ဖော်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Animated Film တွေက အကောင်းဆုံးတွေဆိုတာ Otaku တို့ရော သဘောတူရဲ့လား? မှတ်ချက် ပြုပေးသွားပါဦး!